Isivumelwano esitsha esivunywe ngamxhelo-mnye ngabasebenzi behotele ePan Pacific Toronto
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Isivumelwano esitsha esivunywe ngamxhelo-mnye ngabasebenzi behotele ePan Pacific Toronto
Amalungu e-Unifor Local 112 kwihotele yasePan Pacific Toronto aqinisekise isivumelwano esitsha kunye nomqeshi nge-100 ekhulwini.
"I-Unifor yimanyano yaseCanada yabasebenzi abamkela iindwendwe," utshilo uJerry Dias, uMongameli weSizwe we-Unifor. "Ndiyazingca kakhulu ngomsebenzi owenziwe yikomiti yethu ye-Local 112 yothethathethwano ukufumana isivumelwano esomeleleyo kula maxesha anzima."
Uthethathethwano nabaphathi behotele luye lwaba nzima ngenxa yokuhlawulwa kweenyanga ngobugqwetha kwingxowa-mali yezempilo nentlalo-ntle yabasebenzi behotele kunye nesicwangciso somhlalaphantsi. I-Unifor Local 112 ngaphambili yaphumelela kwiinkqubo zomthetho eyalela ihotele ukuba ihlawule i-200,000 yeedola kwiintlawulo ezingemva kunye nenzala.
“Ukutsho ukuba ubhubhani we-COVID-19 ububuhlungu kubasebenzi ababuk’ iindwendwe yinto ephantsi,” utshilo uJohn Turner, uMongameli weNgingqi we-112. "Ubhubhane ubonise ngokucacileyo ukubaluleka kwabasebenzi basehotele ukuba bakhuselwe ngumbutho owenza abaqeshi baphendule."
Isivumelwano sandisa amalungelo okukhumbula amalungu emanyano, kubandakanya namalungelo okukhumbula anxulumene nobhubhane kude kube ngoMatshi ka-2023, amalungelo angenasiphelo okukhumbula nakuphi na ukudilizwa okunxulumene nokulungiswa, kunye neeveki ezingama-78 zamalungelo okukhumbula nakuphi na okunye ukuyeka. Kananjalo, ulwimi lokhuseleko lwemisebenzi lwamalungu lomeleziwe ngokuzibophelela ukuba angaguquli indawo yehotele ukuba ibe ziindawo zokuhlala. Esi sivumelwano sikwazisa nesikhundla seGqwetha loBulungisa boBulungisa ekuxhaseni abasebenzi abaNtsundu, abeMveli kunye nobuhlanga.
Uphuculo lwezoqoqosho lwesi sivumelwano lubandakanya ukonyuswa kwemivuzo, igalelo eliphezulu lomqeshi kuzo zombini izibonelelo zempilo kunye nezomhlalaphantsi, iinyanga ezisithoba zokhuseleko lwamayeza osapho amiselwe ngugqirha kubasebenzi abasebenza ixesha elizeleyo, imali eyongezelelweyo yeedola ezi-5 ngosuku, kunye nesibonelelo esongeziweyo somhlalaphantsi. icandelo leehotele zaseToronto, ligcinwe. Umqeshi ukwavumile ukuhlawula ithayimthebhile yentsalela yeentlawulo zobugqwirha zomqeshi kwingxowa-mali yezempilo nentlalontle kunye nesicwangciso somhlalaphantsi.
Umsebenzi wogcino lwezindlu nawo waphuculwa, kuquka ukungalahleki kweeyure kubasebenzi basegumbini lehotele ukuba ihotele ikhethe inkqubo engafanelekanga nethandabuzekayo 'yokhetho oluluhlaza' kwixesha elizayo. Abalindi bePan Pacific Room bacoca akukho ngaphezu kwamagumbi ali-14 ngosuku.
“Enkosi kumanyano lweqela lethu leengxoxo kunye nomanyano lobulungu bethu siye safumana isivumelwano esinikezela ngezinto eziphambili kumalungu,” utshilo uAndrea Henry, uSihlalo weYunithi yeNgingqi ye-112 kwihotele yasePan Pacific. "Abasebenzi basehotele babandezeleke ngokwaneleyo kulo bhubhani, kwaye ndiyazingca ngokuba senze umahluko omkhulu kumalungu."
I-Unifor yeyona manyano inkulu yaseCanada kwicandelo labucala, imele abasebenzi abangama-315,000 kuyo yonke imimandla emikhulu yezoqoqosho. Imanyano ikhuthaza bonke abantu abasebenzayo kunye namalungelo abo, balwela ukulingana kunye nobulungisa bezenhlalakahle eCanada nakwamanye amazwe, kwaye bazama ukudala utshintsho oluqhubekayo kwikamva elingcono.